Mamulka Turkiga iyo EU oo heshiis wada gaarey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Doon qaxooti sida iyo madaxa dawlada Stefan Löfven
Mamulka Turkiga iyo EU oo heshiis wada gaarey
La daabacay tisdag 8 mars 2016 kl 10.34
Magaalada Brugsel ee dalka Beljimka oo ey xalay heshiis ku wada gaareen madaxda EU iyo dawladda Turkiga iyo sidii loo xalin lahaa arrimmaha qaxootiga Suuriya.
Qodobbada lagu heshiiyey ayaa dib loo falanqeeyn doonaa toddobaadka foodda innagu soo haya, hase yeeshee muhiimmadii ugu ballaarnayd heshiis guud laga gaaray, sida uu sheegay madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven.
- waa in aannu joojinno safarrada. Waxaa muuqata sida ey qaxootigu ugu dhimmaneyaan badaha, sida uu sheegay Stefan löfven, isagoo hadalkiisii sii watana sheegay in loo baahan yahay sidii loo maareeyn lahaa qaxooti si sharciyeey-san uga yimaada dalka Turkiga, una yimaada waddammada xubnaha ka ah EU.
Go’aanka ey hoggaamiyeyaasha ururka Midowga Yurub iyo turkigu wada gaareen ayaa salka ku haya in dalka Turkiga dib loogu celin karo qaxootiga suuriyaanka ah ee EU soo gaara, hase yeeshee shakhsi walba oo suuriyaan ah ee dib loogu celiyo dalka Turkiga in lagu qaabilo ey waddammada EU-du shakhsi suuriyaan ah deggenaansho siiyaan.
Go’aanka ey waddammada xubnaha ka ah EU iyo Turkigu wada-jirka u gaareen ayaa quseeya oo keliya qaxootiga ka soo jeeda dalka Suuriya, sida uu shegay madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven.
- Heshiiska aannu Turkiga la galney waa un Suuriyaanka. Miyaaney jirin cid kale oo u baahan magan-gelyo?. Cidda keliya ee aannu iminka heshiiska ku wada gaarney waa suuriyaanka oo keliya. Muwaadiniinta kale waxay u maareeyn doonaan habka loogu baahan yahay, sida uu sheegay Stefan Löfven.